राखेपको भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा योजना सम्बन्धी गोष्ठी - NSC
२७ श्रावण २०७६, सोमबार १०:५९
काठमाडौं साउन २६ गते ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेलकुद भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा योजना सम्बन्धी आइतबार गोष्ठी आयोजना गरेको छ । सो गोष्ठीले भौतिक पुर्वाधार निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि योजना बाँडफाँड र जवाफदेहिताको विषयमा छलफल गरेको थियो । १३ औं सागको भौतिक पुर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बताइएको छ ।
गोष्ठीको उद्घाटन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनार (विश्वकर्मा) ले गरेका थिए । उनले राखेपलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउने बताए । ‘सुशासन र संस्थागत विकासमा अबको राखेपले नयाँ मोड लिने छ ।’ उनले भने,‘अब कर्मचारीको दरबन्दीको समस्या हल भैसकेको छ ।’
महालेखा परिक्षक दामोदर पुडासैनले खेलकुदमा बर्षेनी बेरुजु बढिरहेको बताए । ११ सय ७४ जनाको नाममा बेरुजु रहेको बताउँदै भने, ‘यो कसैको पनि हितमा छैन । आर्थिक ऐन नियम विपरित जाने कोहि पनि बचेका छैनन् र कसैले पनि बचाउन सक्दैन ।’ उनले शुरुमा नै खरिद योजना बनाएर कार्यन्वन गर्न सुझाव समेत दिए । उनले देशमा ४० प्रतिशत खर्च असरामामात्र हुनु विडम्बना भएको बताए । उनले खेलकुद भौतिक पुर्वाधारको परफमेन्स अडिट टोली खताइएको र चैतसम्म संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए । ‘भौतिक पुर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? कति अपुग छ । भएर पनि त्यसलाई उपयोग गरिएको छैन कि ? लगायतको विषयमा अडिट हुन्छ ।’ उनले भने ।
10th SAF Game – 18 to 28 April 2006, Colombo, Srilanka
21ST OLYMPIC, Montreal, Canada, 1976
ट्राइयाथलन खेलाडी मलेसिया प्रस्थान
ह्यान्डबलमा प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेश विजयी